रूस र युक्रेन बीच आज कूटनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण। एक पटक सहोदर देशहरूमा सक्रिय छन् आफूलाई बीच सबै सम्झौताहरू curtail। रूसी आक्रमण बाट शुल्क को स्थिर ध्वनि को युक्रेनी भाग। राजनीतिज्ञ कूटनीतिक सम्बन्ध अप हावा गर्न थाले। धेरै नागरिक एकदम के यो नतिजा बुझ्न छैन। हामी के हो बुझ्न प्रयास गर्नेछ कूटनीतिक सम्बन्ध को बिच्छेद दुई देशहरू बीच। जो देशहरूमा सम्बन्ध समर्थन छैन र किन, लेख मा बताउनुभयो।
कूटनीतिक सम्बन्ध को Severance: कारणहरू
पहिलो, रूपमा के कारणहरू छन्। मुख्य व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा छन्:
शत्रुतापूर्ण अमेरिका गर्न, सैन्य आर्थिक वा अन्य सहयोग। एउटा उदाहरण पूर्व सोभियत संघ को क्षेत्र मा देश हो। आर्मेनिया र अजरबैजानका भन्दा द्वन्द्व को एक राज्य हो नागोर्नो-कराबाख। बेलारुस र काजाकिस्तान आधिकारिक यो टकराव मा अजरबैजान समर्थन। यो सबै आर्मेनिया र बीच कूटनीतिक सम्बन्ध को curtailment गर्न जान्छ। देशमा सामूहिक सुरक्षा सन्धि संगठन (सामूहिक सुरक्षा सन्धि को संगठन) र भन्सार संघ अन्तर्गत दायित्व एकताबद्ध रूपमा पूर्ण ब्रेक सम्झौता सम्म, सबै भन्दा संभावना छैन, आउनेछ।
राजनीतिक शासन को हिंसात्मक परिवर्तन। उदाहरणका लागि, मैदान मा भएको घटना वर्तमान राष्ट्रपति विक्टर Yanukovych को ढलाउनु गर्न नेतृत्व गरेको छ। यी घटनाहरू युक्रेन र रूस बीच ठंडा सम्बन्धित छ छ।
अलग वा देश को एकीकरण। उदाहरण कोरिया को गणतन्त्र (दक्षिण) र उत्तर कोरिया (उत्तर) गर्न कोरिया को प्रोफाइल छन्। अचम्मको कुरा, एउटा सानो र गर्व इस्टोनिया अझै पनि एक राज्य उत्तर कोरिया पहिचान गर्दैन। यो वास्तवमा उत्तर कोरियाई जीवनमा प्रतिबिम्बित कसरी यो स्पष्ट छ।
विगतमा सैन्य संघर्ष। एउटा उदाहरण, एउटै DPRK र संयुक्त राज्य अमेरिका रूपमा। केही मानिसहरू थाहा छ, तर हाम्रो देश जापान संग युद्ध मा अझै पनि छ।
विचारधारा को परिवर्तन। उदाहरणका लागि, क्युबा को क्रान्ति पछि अमेरिकी सबै सम्बन्ध severed।
प्रादेशिक दावी। उदाहरणका लागि, यो सम्बन्ध ब्रिटेन र अर्जेन्टिना को फकल्याण्ड टापु भन्दा बीच स्थान लियो।
कारण फरक हुन सक्छ। यसलाई कूटनीतिक सम्बन्ध को severance को नतिजा थाहा महत्त्वपूर्ण छ। यो थप छलफल गरिनेछ।
त्यसैले दुई राज्य "Sworn"। हामी कूटनीतिक सम्बन्ध को severance को नतिजा सूची:
यस कूटनीतिक मिशन को एक अनिवार्य समीक्षा।
पहिले पुग्यो सबै सम्झौताहरू तोड्न।
एक आर्थिक, राजनीतिक treaties प्रवेश गर्न नसक्नुको।
सरकारको बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कुनै संभावना।
अंतर युद्ध होइन
कुनै पनि अवस्थामा कूटनीतिक सम्बन्ध को बिच्छेद के हुनेछ, यो भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ, तर यो देश युद्ध मा छ मतलब छैन। यसबाहेक, खाली यो पहिले थियो, सैन्य संघर्ष गर्न नेतृत्व गर्दैन। वैश्विक संसारमा, यो दुई भन्दा बढी सय स्वतन्त्र देशहरू छ। जो दुई देशहरू बीच कूटनीतिक सम्बन्ध को बिच्छेद मतलब? यो विशिष्ट उदाहरण मा निर्भर गर्दछ।
रूस र युक्रेन बीचको सम्बन्ध
उदाहरणका लागि, रूस र युक्रेन बीचको सम्बन्ध को गिरावट लिन। युरोपेली संघ को प्रवेश अन्तिम स्वतः दुई देशहरू बीच व्यापार सम्बन्ध को अंतर हो। यो बुझ्ने, युक्रेनी सामान रूस को क्षेत्र मा भन्सार सुविधा छ छ। युरोपेली उत्पादनहरु सीमाना खोल्ने तिनीहरूले रूस मा कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना हतार हुनेछ भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व हुनेछ। हामी अझै यसको लागि तयार छन्। हाम्रो प्राविधिक सक्षमता आज पनि घरेलू बजार मा, युरोपेली उत्पादनहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति छैन।
युक्रेन र रूस बीचको अवस्था "euromaidan" र वैध राष्ट्रपति Yanukovych को यसैले ढलाउनु worsened। नयाँ अधिकारीहरु विरोधी-रूसी लफ्फाजी घोषणा गरे।
कुरा नै आत्मा मा जारी भने, कि जो रूस संग कूटनीतिक सम्बन्ध को severance, जवाफ छ भन्ने हो प्रश्न,: किनभने बिना नकारात्मक परिणाम आउनेछ, केही छैन। तर, जहाँ लागत देशहरूमा साझेदार हुन जारी परिस्थिति हो। हामीलाई उदाहरण विचार गरौं।
अंतर - भागीदारी को अन्त?
अब, आर्थिक मामलामा दुई देशहरू बीच कूटनीतिक सम्बन्ध को severance हो। राज्य सीधा प्रत्येक अन्य सम्पर्कमा नहुन सक्छ, तर तिनीहरूले तेस्रो देशहरूको मध्यस्थता सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दुई मित्र अब प्रत्येक अन्य कुरा गर्दा, तर तेस्रो साथीसँग रोक्न छैन यो कम्पनी मा छोराछोरीको भ्कगडा को reminiscent छ। फलस्वरूप, तिनीहरूले तेस्रो साथी मार्फत "कुरा" गर्न थाल्छन्। एउटै कुरा बारे - अमेरिका संग। तिनीहरूले सिधै दोश्रो सम्पर्क अब हो, तर यो कमाउन गर्ने बिचौलियों छन्।
रूसी कोइला र युक्रेन बीच एउटा कारोबार उदाहरणको रूपमा। रूस Donbas मा कोइला किन्छ र युक्रेन यसलाई resell। कीव यो मतलब हुनेछ रूपमा आधिकारिक मान्यता, डोनेट्स्क खनिज सिधै किन्न सकिएन। तर पनि कोइला नत्याग्ने, छैन, यो ऊर्जा सुरक्षा खतरामा हुनेछ गर्न सक्नुहुन्छ। आधिकारिक कीव अधिकारीहरु हालै चाँडै Donbass कोइला त्याग्न र यसलाई दक्षिण अफ्रीका देखि किन्न भनेर यसो गरेका छन्। राजनीतिक र आर्थिक निष्कर्ष हामीले छैन, यो अभ्यास मा कूटनीतिक सम्बन्ध को severance को अर्थ बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
यस्तो विश्रामहरू बारम्बार छन्। पूंजीपति र समाजवादी: यो दुई प्रणाली मा कारण संसारको विभाजन हुन गर्न प्रयोग। एकल देशमा क्रान्ति र शासन परिवर्तन पूर्णतया धेरै देशहरूमा सबै सम्झौताहरू को बिच्छेद गर्न पुगे। एउटा उदाहरण तर, अपवाद थिए क्युबा, इरान, भियतनाम, चीन, र यति मा। डी छ।
पहिचान - शत्रु भएका छन्
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, कूटनीतिक सम्बन्ध को बिच्छेद अर्को एक देश स्थिर प्रादेशिक दावी जोडिएको छ। कुनै पनि तरिका मा एक समस्या छ नगर्ने तेस्रो राज्य को यो भाग बाट ग्रस्त छ।
एक हडताली उदाहरण सेनेगल र ताइवान बीच द्वन्द्व छ। यो सबै गर्दा सेनेगल, चीन सँग सम्झौता ताइवान चिनियाँ क्षेत्रमा छ भनेर acknowledging गर्न समानान्तर हस्ताक्षर भएको छ, 2005 मा सुरु भयो। प्रतिक्रिया, ताइवान सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा को क्षेत्र मा सबै वित्तीय परियोजनाहरू स्थिर। सेनेगल काउंटर बताए।
यो उदाहरण द्वन्द्व संग गर्न केही छ जो तेस्रो देश, artificially यसलाई मा तान्नुभयो गरिएको छ भनेर देखाउँछ। यस्तो घटना बारम्बार आउँदैन। कोसोभो, क्रिमीआ, अब्खाजिया, दक्षिण Ossetia: हालैका वर्षहरूमा मात्र विवादित क्षेत्रहरूमा वृद्धि। हाम्रो देश को एक भाग स्वतः युक्रेन संग सम्बन्ध को बिच्छेद गर्न जान्छ रूपमा क्रिमीआ को कूटनीतिक पहिचान, एक स्वतन्त्र गणतन्त्र रूपमा अब्खाजिया को पहिचान तुरुन्तै जोरजियन पक्ष बाट विरोध गर्न नेतृत्व गर्नेछन्। प्रादेशिक "redivision" involuntarily अन्य देशहरूमा गर्न संघर्ष मा आएको। असफल तर्फ खडा। यो धेरै छैन मात्र राजनीतिक अंक गुमाए, तर पनि बहु-लाख डलर आर्थिक अनुबंध। र "स्थिर" विवाद सबै थप वा कम परिभाषित भने, थप द्वन्द्व - अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति लागि वास्तविक चुनौती।
को सोभियत संघ र अल्बानिया बीच बिच्छेद सम्बन्ध
एक अद्वितीय घटना 1961 मा भयो। सानो र सोभियत संघ को शुरुवात प्रस्तुत गर्न गर्व, अल्बानिया stalin व्यक्तित्व पंथ को जोखिम सन्दर्भमा दावी। ख्रुश्चेव कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेर द्वारा प्रतिक्रिया। मास्को देखि - सोभियत दूतावास तिराने र अल्बेनियन् देखि फिर्ता लिया थियो। 1990 सोभियत नागरिकहरु बिर्सनुभएको छ सम्म अल्बानिया जस्तै समाजवादी देश छ भन्ने। उनको मिडिया मा एक शब्द थिएन बारेमा। मात्र 1990 मा, देश यसलाई गरे, तर सोभियत सरकार यो 1964 मा, पहिले गर्न खोजे।
जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था मामलामा कूटनीतिक सम्बन्ध को severance मतलब? स्थिति झल्काउँछ जो मुख्य दस्तावेज, - 1961 को कूटनीतिक सम्बन्ध मा भियना कन्वेंशन। मुख्य बुँदाहरू:
जसको क्षेत्र मा राज्य को कूटनीतिक मिसन, सम्बन्ध को बिच्छेद को घटना मा राजनयिकहरुलाई र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको सुरक्षित खण्डमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
को वाणिज्य दुतको कार्यालय (extraterritoriality को दायाँ) को निष्ठा र inviolability सुनिश्चित गर्नुहोस्। चाखलाग्दो कुरा, यस्तो मिसन पनि पूर्ण-मात्रा युद्ध को मामला मा राज्य सुम्पिएको।
सम्बन्ध मा ब्रेक को मामला मा, अन्तर्राष्ट्रिय treaties प्रदर्शन हुनुपर्छ। यो नियम लगभग कहिल्यै लागू गरिएको छ।
कूटनीतिक अर्थ र तह दूतावास को प्रभाव को बिच्छेद
यो दूतावास को एक समीक्षा एक तुच्छ उपाय छ कि तर्क गर्न गल्ती हो। वास्तवमा यो छैन। व्यापक कार्यहरु दूतावास:
आधिकारिक कागजातको Legalization।
निवास को देश मा नागरिकता छ नगर्ने आप्रवासी लागि registrar प्रकार्य।
को जारी वा पासपोर्ट नविकरण।
देश जसमा वाणिज्य दुतको कार्यालय नागरिक लागि भिसा जारी।
कानुनी सल्लाह, अदालत मा प्रतिनिधित्व, र यति मा। डी
वास्तवमा, व्यापक consular कार्यहरु। त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध मा एक ब्रेक मतलब हुनेछ? यो मुख्यतया साधारण नागरिकहरु मा नकारात्मक प्रभाव छ। "मूल" दूतावास - कहिलेकाहीं विदेश मा एक कठिन अवस्थामा पक्रेको मान्छे को लागि मात्र आशा छ। साथै, कूटनीतिक मिशन भिसा र परमिट देश प्रवेश गर्न मुद्दाहरू। प्रवासी श्रमिकहरुलाई र पर्यटकहरुका लागि मात्र साधन - भिसा शासन, को दूतावास को देशहरूमा बीच भने।
कूटनीति - नाजुक कला। एक गलत शब्द - .. चरम उपाय - र सारा जातिहरूलाई नकारात्मक व्यापार योद्धा, सशस्त्र द्वन्द्व, बाध्य नियुक्ति, आदि कूटनीतिक सम्बन्ध को severance को प्रक्रिया मा संलग्न छन्। .. दें, अर्थात् निसस्त्र युद्ध - संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुसार। अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने मात्र चरम अवस्थामा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। निष्पक्षता मा, हुनत युक्रेन रूस पहिला आक्रमण गर्ने देश वा व्यक्ति रूपमा ठान्नुहुन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यसलाई युद्ध घोषणा गर्दैन। यसलाई कूटनीतिक सम्बन्ध र unilaterally तोड्न छैन। हामी यो लफ्फाजी कार्य बिना लफ्फाजी रहनेछ भन्ने आशा। हामी आशा यसलाई जो देशहरूमा बीच कूटनीतिक सम्बन्ध को बिच्छेद अर्थ, स्पष्ट अहिले छ।
Centralization र decentralization
राज्य एकाधिकार: प्रकार। राज्य monopolies विषयको। प्राकृतिक monopolies को राज्य विनियमन
पैसा को कार्य
कायर बबी मा र अनुभवी अपराधी कोड पढेर बताए
सही आकार FBS एकाइ कसरी चयन गर्न
मानक र दीर्घकालीन ऋण: ऋणको बारेमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण
कारण र परिणाम: मा 1686 पोल्याण्ड संग अनन्त शान्ति
कलेजो बच्चा खाना को तयारी
यो सांगीतिक प्रेम कहानी। यो श्रृंखला "प्रान्तीय सरस्वती": अभिनेता र भूमिकाको